Zobumba isikhumba esimhlophe ezinsukwini ubudala kubhekwe ilungelo ephezulu. Umphakathi izintokazi babo bonke ubudala bamvikela okuvela elangeni, kusukela ububomvu kanye ukubukeka amnyama. Esizukulwaneni ngesizukulwane, kuyo yonke imikhaya idlulisele ulwazi imfihlo mhlophe isikhumba ukugcina ukubukeka kwayo yizicukuthwane futhi freshness.
Namuhla, ukwakheka abaculi ukuthola ephelele "ngendwangu" ngokuba enkulu stylish makeup amantombazane matt Milky isikhumba tone. Kodwa entwasahlobo nasehlobo izikhathi wobulili fair sebeqala avele izinkinga ezihlukahlukene yezimonyo: kusukela inkanuko smeshinok yobudala freckles ukuba chloasma, lentigines, izindawo isibindi kanye nezinye izilonda esikhunjeni. Ezinye zazo yilezi ngempela ayinangozi, isibonelo, efelidy, noma "ukwanga ilanga", kuyilapho abanye adinga ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe, njengoba kabanzi ngezimpawu zesifo.
Ngaphambi zibe mhlophe isikhumba sakho, udinga ngosizo ochwepheshe ukucacisa uhlobo ukuhwalala yayo. Ezimweni izifo yezitho zangaphakathi, uqale ukususa imbangela bese uqhubekela phambili ekubuyiselweni ubuhle bemvelo.
Lapho kangcono ukubamba mhlophe: e salon ubuhle noma ekhaya?
Ngaphakathi, inqubo mhlophe isikhumba siqukethe izigaba ezimbili:
- ukunciphisa ukukhiqizwa sombala i-melanin;
- eliphathisa ungqimba Horny we epidermis.
Indlela eyodwa - Chemical uyaxebuka
Ngaphambili beauticians asetshenziselwe le nhloso utshwala salicyl (20%), phenol noma amafutha equkethe mercury. Lezi zingxenye akuzona ephephile, ngakho kwathathelwa indawo ama-asidi alpha-hydroxy, noma AHA: acidosis acid, citric acid, glycolic acid, uphayinaphu, ubhamubhamu, iwayini, citrus kanye nogqozi izithelo. Ngaphezu kwalokho, impahla ukwehla melanin zamagama kuyinto ascorbic acid (uvithamini C). Ochwepheshe beauticians, sazi ukuthi singabhekana kanjani zibe mhlophe isikhumba nge ngempumelelo chemical peels, kungaba kahle ukukhetha AHA okuhlushwa futhi uncome ukunakekelwa eyalandela kwesokudla: nge amafutha okuthambisa noma esebenzayo Lentulo ukhilimu.
Indlela ezimbili - laser mhlophe ebusweni, entanyeni, decollete nezandla
Lapho izinguquko ezihlobene nokukhula isikhumba abesifazane asebeqinile ngokuvamile ukwakheka yobudala izindawo nge wokuqukethwe lelisetulu melanin. Homemade izinqubo isikhumba siphungule kulokhu engalethi umphumela oyifunayo. Cosmetologist ngosizo idivayisi laser zanamuhla ambalwa amaseshini ukusiza nabuhlungu mhlophe lezi zindawo ngaphandle kokulimaza nezicubu eziseduze.
Lapho kungenzeka ukuba sifeze inqubo amakhorali?
Kukhanye isikhumba nge chemical peels kanye laser resurfacing e beauty salon ochwepheshe batusa phakathi kukaSepthemba no-Apreli, lapho imisebe yelanga akuzona matasatasa ehlobo. Inqubo yangaphakathi kwezwe efanayo mhlophe ukuthi kukhona kangako ubudlova uma beqhathaniswa endlwaneni eyakhiwe, kungenziwa ngokuphumelelayo kwenziwe ehlobo, kodwa kusihlwa. Ntambama, ngemva kwanoma iyiphi ukucaciswa nezinqubo kuyodingeka ukuvikela okhilimu kanye SPF Ukuvikelwa amayunithi okungenani 30-50, isigqoko esinompheme omkhulu, ikakhulukazi ngezikhathi bandisa inkonzo solar - kusuka amahora 10 kuya 17. By the way, khumbula ukuthi umzimba wasezulwini, embozwe amafu, futhi zingase zibangele ukwakheka isikhumba ubudala izindawo.
Indlela zibe mhlophe isikhumba, freckles kanye lesikhumba uma akubonakali kakhulu? Velvet izilenge nge touch of ubisi ingatholakala kanye ekhaya. Ngenxa yale njongo, lesi sitshalo Sekuyisikhathi eside esetshenziswa ngokuhle amakhorali izakhiwo lemon, parsley, ikhukhamba, ezinye izinhlobo amajikijolo: strawberry, ama-raspberry, ikhabe. Yidla kahle futhi zibe mhlophe imvubelo isikhumba elikulesi. I buso nge nomphumela siphungule, ochwepheshe ukweluleka ukwengeza imikhiqizo yezilwane: ushizi, ubisi, amaqanda omhlophe, yogurt noma ukhilimu omuncu. Queen laseGibhithe Cleopatra wayedume isikhumba enhle ngokumangalisayo, okuyinto ayenakho sibonga ubisi nokugeza. A Royals medieval rejuvenate futhi zibe mhlophe isikhumba zokugeza nge-champagne. Namuhla, ubuhle eziningi ukwazi indlela zibe mhlophe isikhumba nge lamanzi esiphethu, toning wasinikeza iyunifomu luhlaza enempilo.
Nyusa isikhumba siphungule amaminerali ezifana i-hydrogen peroxide, kaolin, ne-zinc. Bangeze imaskhi kumelwe niqaphelisise (ikakhulukazi zinc). Kakhulu ukubhekana ngokucophelela nala makhemikhali badinga intombazane nge ezomile isikhumba hlobo.
Okubalulekile! Ukukhetha indlela mhlophe ubuso nomzimba, kubalulekile ukuba ubonane cosmetologist professional abanekhono. imaski Homemade nemikhiqizo yemvelo hhayi elicwengwé kuphela kodwa futhi rejuvenate, moisturize futhi uqinisa, ukuvimbela ukwakheka imibimbi, ekuthuthukiseni ukubonakala.